အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ရမလဲ ? – Real Thadin
အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ရမလဲ ?
October 9, 2019 Siberian Bird Sports 0
လာမယ့် အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီနေ့မှာ တစ်နေကုန် One Championship ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အမည်ကို One : Century လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၊ One Championship သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အာရှ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး MMA ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲအတွင်း ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာတွေရဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲပေါင်း များစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ပွဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး ခွဲခြား ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ရဲ့ ညနေခင်းလောက်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။Part 1 ပွဲစဉ်တွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး Atomweight World Championship လုပွဲ အဖြစ် စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ တရုတ်သူ ရှောင်ဂျီနန် တို့က ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကိုလဲ ဒီကဏ္ဍမှာပဲ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလိုင်းဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် UFC ကနေ ပြောင်းရွှေ့ ထိုးသတ်လာတဲ့ ဒီမက်ထရီးရပ် ဂျွန်ဆင် ဟာ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဒန်နီ ကင်ဂတ် နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်မှာပါ။ လိုက်ဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ စင်္ကာပူ က ဖိုက်တာ ခရစ်ရှန် လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာပါ။ (အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ ခရစ်ရှန်လီ တို့ဟာ မောင်နှမ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။)မြန်မာပြည်က အခြား ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ဟာ တောင်ကိုရီးယားက ဖိုက်တာ ယွန်ချန်မင် ကို Part 1 ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Part 1 ပွဲတွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး Skynet ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေက မနက် Skynet Sport3နဲ့ Skynet Sports HD လိုင်းတွေမှာ မနက် 6.30 ကနေ စတင် ကြည့်ရှုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံ လုပွဲတွေကိုတော့ နံနက် 9.30 ဝန်းကျင်မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ကာ ၊ MNTV မှာလဲ ပြသသွားမယ်လို့ လို့ သိရပါတယ်။Part2ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ MMA ရွှေခါးပတ် လုပွဲ က2ပွဲ နဲ့ မွေးထိုင်းချန်ပီယံလုပွဲ 1 ပွဲ ၊ Kickboxing လုပွဲ တစ်ပွဲတို့ နဲ့ အတူ အခြား ပွဲစဉ်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ Parts2ရဲ့ အဓိက ပွဲကတော့ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ လုပွဲ ဖြစ်ပြီး ၊ ဘီဘီယာနို ဖာနန်ဒက် နဲ့ ဘယ်လီဂွန် တို့ရဲ့ ဘန်တန်ဝိတ် ရွှေခါးပတ်လုပွဲကလဲ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် ရှိနေဦးမှာပါ။
ဟန်ရေးပြ အစီအစဉ်ကိုတော့ မနေ့က ဂျပန်မှာပဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ ရဲ့ ခြေထောက်ကန်ချက်တွေကို ခုခံဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဟန်ရေးပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ ဟန်ရေးပြတဲ့ အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာပဲ ချွှေးတွေ တော်တော်ထွက်နေခဲ့တာကြောင့် ၊ သက်လုံး ပိုင်းတော့ အားနည်းနေတယ်လို့ ယူဆချင်စရာပါ။အောင်လ ကြိုးဝိုင်းထဲကို ဟန်ရေးပြဖို့ ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဂျပန်က ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် ကြိုဆိုခဲ့ကြသလို ၊ မြန့်မာ့ သူရဲကောင်းကြီးကလဲ တိုက်ကွက်မျိုးစုံကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဗီရာကို ထိုးသတ်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အောင်လ ရဲ့ ဝိတ်ကလဲ ပြည့်လာတယ်လို့ ခံစားရပြီး ၊ သူ့ရဲ့ ကန်ချက်တွေကို ထုတ်သုံးချိန်မှာလဲ ၊ ပြင်းအားက တော်တော်လေးကို ရှိနေခဲ့ကာ သတိထားမိပါတယ်။အထူးသဖြင့် အောင်လ ရဲ့ နည်းပြ ဟင်နရီ ဟုဖ် ဟာ ကန်ချက်တွေ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန်ချက်တွေ ထုတ်သုံးလာဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။
Part2ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်း မြန်မာ စံတော်ချိန် 2.30 မှာ စတင်မှာပါ။ အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် အချိန်ကတော့ ညနေ 5.00 နာရီမှာ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ Skynet မရှိသူတွေ အနေနဲ့ MRTV Entertainment ကနေလဲ ပြသသွားမယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။
Credit – SPORTS MYANMAR
လာမယျ့ အောကျတိုဘာလ 13 ရကျနေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတျတှေ အတှကျ ထူးခွားတဲ့ နတေ့ဈနလေို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပွီး ၊ အဲဒီနမှေ့ာ တဈနကေုနျ One Championship ပှဲစဉျတှကေို တိုကျရိုတျ ကွညျ့ရှုခှငျ့ ရရှိသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ဂပြနျမှာ ကငျြးပမယျ့ အဲဒီပွိုငျပှဲရဲ့ အမညျကို One : Century လို့ အမညျပေးထားပွီး ၊ One Championship သမိုငျးကွောငျး တဈလြှောကျ အခမျးနားဆုံးနဲ့ အာရှ ရဲ့ အကွီးကယျြဆုံး MMA ပွိုငျပှဲတဈပှဲ ဖွဈလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီပွိုငျပှဲအတှငျး ကမ်ဘာကြျော ဖိုကျတာတှရေဲ့ ခနျြပီယံလုပှဲပေါငျး မြားစှာ ပါဝငျမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ပှဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပွီး ခှဲခွား ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာ့ ဂုဏျဆောငျ အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ ပှဲစဉျကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပှဲအဖွဈ သတျမှတျထားတာ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ အောကျတိုဘာလ 13 ရကျနေ့ ရဲ့ ညနခေငျးလောကျမှာ စတငျ ယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျကွဖှယျရှိနပေါတယျ။Part 1 ပှဲစဉျတှထေဲမှာတော့ အမြိုးသမီး Atomweight World Championship လုပှဲ အဖွဈ စင်ျကာပူက နာမညျကြျော ဖိုကျတာ အိနျဂလြာ လီ နဲ့ တရုတျသူ ရှောငျဂြီနနျ တို့က ထိုးသတျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလျလုပှဲတှကေိုလဲ ဒီကဏ်ဏ္ဍမှာပဲ ဆကျလကျ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဖလိုငျးဝိတျ Grand Prix Championship ဗိုလျလုပှဲ အဖွဈ UFC ကနေ ပွောငျးရှေ့ ထိုးသတျလာတဲ့ ဒီမကျထရီးရပျ ဂြှနျဆငျ ဟာ ဖီလဈပိုငျ နိုငျငံသား ဒနျနီ ကငျဂတျ နဲ့ ဗိုလျလုပှဲ အဖွဈ ယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျမှာပါ။ လိုကျဝိတျ Grand Prix Championship ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ စင်ျကာပူ က ဖိုကျတာ ခရဈရှနျ လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗျ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ သှားမှာပါ။ (အိနျဂလြာ လီ နဲ့ ခရဈရှနျလီ တို့ဟာ မောငျနှမ တှေ ဖွဈပါတယျ။)မွနျမာပွညျက အခွား ဖိုကျတာ တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ ဖိုးသျောဟာ တောငျကိုရီးယားက ဖိုကျတာ ယှနျခနျြမငျ ကို Part 1 ခေါငျးစဉျအောကျမှာပဲ ထိုးသတျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Part 1 ပှဲတှကေိုတော့ အောကျတိုဘာလ 13 ရကျနေ့ မနကျပိုငျးမှာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး Skynet ရှိတဲ့ ပရိသတျတှကေ မနကျ Skynet Sport3နဲ့ Skynet Sports HD လိုငျးတှမှော မနကျ 6.30 ကနေ စတငျ ကွညျ့ရှုလို့ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ခနျြပီယံ လုပှဲတှကေိုတော့ နံနကျ 9.30 ဝနျးကငျြမှာ စတငျမှာ ဖွဈကာ ၊ MNTV မှာလဲ ပွသသှားမယျလို့ လို့ သိရပါတယျ။Part2ပှဲစဉျတှမှောတော့ MMA ရှခေါးပတျ လုပှဲ က2ပှဲ နဲ့ မှေးထိုငျးခနျြပီယံလုပှဲ 1 ပှဲ ၊ Kickboxing လုပှဲ တဈပှဲတို့ နဲ့ အတူ အခွား ပှဲစဉျပေါငျး မြားစှာ ပါဝငျလြှကျရှိနပေါတယျ။ Parts2ရဲ့ အဓိက ပှဲကတော့ အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ လုပှဲ ဖွဈပွီး ၊ ဘီဘီယာနို ဖာနနျဒကျ နဲ့ ဘယျလီဂှနျ တို့ရဲ့ ဘနျတနျဝိတျ ရှခေါးပတျလုပှဲကလဲ ပရိသတျတှေ အတှကျ ဆှဲဆောငျမှု အပွညျ့ ရှိနဦေးမှာပါ။
ဟနျရေးပွ အစီအစဉျကိုတော့ မနကေ့ ဂပြနျမှာပဲ ပွုလုပျသှားခဲ့ပွီး ၊ ဗီရာဟာ အောငျလ ရဲ့ ခွထေောကျကနျခကျြတှကေို ခုခံဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ပွငျဆငျလာတယျ ဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုး ဟနျရေးပွသှားခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော သူဟာ ဟနျရေးပွတဲ့ အခိုကျအတနျ့အတှငျးမှာပဲ ခြှေးတှေ တျောတျောထှကျနခေဲ့တာကွောငျ့ ၊ သကျလုံး ပိုငျးတော့ အားနညျးနတေယျလို့ ယူဆခငျြစရာပါ။အောငျလ ကွိုးဝိုငျးထဲကို ဟနျရေးပွဖို့ ဝငျရောကျလာခြိနျမှာတော့ ဂပြနျက ပရိသတျတှကေ တဈခဲနကျ ကွိုဆိုခဲ့ကွသလို ၊ မွနျ့မာ့ သူရဲကောငျးကွီးကလဲ တိုကျကှကျမြိုးစုံကို ပွသသှားခဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဗီရာကို ထိုးသတျရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ အောငျလ ရဲ့ ဝိတျကလဲ ပွညျ့လာတယျလို့ ခံစားရပွီး ၊ သူ့ရဲ့ ကနျခကျြတှကေို ထုတျသုံးခြိနျမှာလဲ ၊ ပွငျးအားက တျောတျောလေးကို ရှိနခေဲ့ကာ သတိထားမိပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ အောငျလ ရဲ့ နညျးပွ ဟငျနရီ ဟုဖျ ဟာ ကနျခကျြတှေ လကေ့ငျြ့ပေးတဲ့ နရောမှာ နာမညျကွီးတဈယောကျ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကနျခကျြတှေ ထုတျသုံးလာဖို့ ပွငျဆငျလာခဲ့ဟနျ ရှိပါတယျ။
Part2ပှဲစဉျတှကေိုတော့ အောကျတိုဘာလ 13 ရကျနေ့ နခေ့ငျးပိုငျး မွနျမာ စံတျောခြိနျ 2.30 မှာ စတငျမှာပါ။ အောငျလ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတျမယျ့ အခြိနျကတော့ ညနေ 5.00 နာရီမှာ ဖွဈလာဖှယျရှိနပေါတယျ။ အဲဒီပှဲစဉျကိုတော့ Skynet မရှိသူတှေ အနနေဲ့ MRTV Entertainment ကနလေဲ ပွသသှားမယျလို့ ကနဦး သတငျးတှေ အရ သိရပါတယျ။
ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်အလှူတွေလုပ်ပြီး သေမင်းကို လက်ခမောင်းခတ်ကာ စောင့်မျှော်နေတဲ့ အသက်တစ်ရာကျော်အဖိုး
ဗီရာနဲ့ပွဲအတွက် ခေါင်းထဲမထားပဲ ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ တိုကျိုမြို့လယ်မှာ လျှောက်လည်နေတဲ့ အောင်လ